Ny Affinity Publisher dia natomboka ho fampiharana amin'ny famoahana ny famoahana | Famoronana an-tserasera
Affinity Publisher amin'ny teny 300: manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fametrahana editorial izy
Efa nanao izany isika fantatra taloha kelin'ny vaovao tsara an'ny Affinity Publisher, fa izao kosa dia holazainay aminao amin'ny teny 300 ny zava-drehetra izay fampiharana izay natombok'i Serif.
Una fampiharana izay miaraka amin'ny Affinity Photo, ho toy ny safidy tsara indrindra amin'ny Adobe Photoshop, ary Affinity Designer, izay manaraka ny dian'ny Adobe Illustrator, ary izay miaraka mamorona trio mahery noho ny matanjaka.
Indrindra rehefa avy amin'ny Affinity Publisher ianao dia afaka miditra amin'ny fitaovana rehetra an'ny roa hafa amin'ny tsindry fotsiny. Ity ve ilay endri-javatra manokana indrindra nambaran'ny Serif amin'ny fanombohany.
Saingy afaka manantena zavatra bebe kokoa amin'ny Affinity Publisher izahay ary inona no antenainao amin'ny fampiharana? natokana ho an'ny famoahana editorial: pejy master, pejy miatrika, grids, latabatra, typografia mandroso, fikorianan'ny lahatsoratra ary famoahana printy matihanina.
Tsy mijanona eo ihany, fa mamela anao hanafatra sy hanondrana ireo rakitra vector rehetra malaza sy ny maro hafa anisan'izany ny EPS, PSD, PDF. Izy io koa dia ahafahanao manonta antontan-taratasy amin'ny endrika ankehitriny indrindra toa ny PDF / X miaraka amin'ny fanohanan'ny hyperlink ho an'ireo antontan-taratasy zaraina amin'ny Internet.
Io Serif io ihany no mirehareha amin'izany dia mahazaka rakitra mavesatra toa maivana loatra toy ny volom-borona. Izy io koa dia manohana an'i Pantone, fitantanana loko na CMYK na ICC ary manana ireo fitaovana matihanina toy ny pensilihazo, bitmap na sosona famenoana hamokarana vokarin'ny aloka ary maro hafa.
Aza adino fa amin'ny fandefasana azy dia amin'ny tolotra 20%, midika izany amin'ny vidiny 43,99 euro dia azonao atao ny manana Affinity Publisher ho an'ny solosainao Windows na MacOS. Rindrambaiko iray izay efa hitanay tao izay infographic izay mampiseho amintsika ny atao hoe programa Adobe malaza indrindra ary inona no mety ho safidy hafa lavorary ka tsy miankina amin'ny fandoavam-bola isam-bolana an'ny Creative Cloud.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Affinity Publisher amin'ny teny 300: manana ny zavatra rehetra ilainao amin'ny fametrahana editorial izy
Omeo fihodinana ny zava-drehetra, na dia Ragged na mihomehy aza
Affinity Publisher dia afaka manamarika ny mialoha sy aorian'ny ho an'ny mpamorona